Ohlonishiwe wenza ezibukwayo kwezeSayensi
UNKSZ Tankiso Hortencia Moso usanda kuchonywa uphaphe nguMnyango wezeSayensi kuleli ngokuba wumuntu omusha oyibambe ishisa emkhakheni wezesayensi Isithombe:SITHUNYELWE
PHILI MJOLI | October 10, 2019
BEKUNGUYENA kuphela isitshudeni sesifazane esichonywe uphaphe nguMnyango wezeSayensi nobuChwepheshe kuleli.
UNksz Tankiso Hortencia Moso usanda kuchonywa uphaphe yilo mnyango ngokuba wumuntu omusha oyibambe ishisa emkhakheni weSayensi.
UNksz Moso owenza iMasters in Astrophysics eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, okuwumkhakha wokucwaninga ngezinkanyezi nokwenzeka emkhathini.
UNksz Moso usebenza esikhungweni esinobuxhakaxhaka obucwaninga ngezinkanyezi eMarion Island, eseSub-Antarctic Indian Ocean, ecwaninga ngokuthi ngabe izinkanyezi zakhekha kanjani nokuthi zakhekha emuva kwesikhathi esingakanani?
Le ntokazi ineDiploma ye-Electrical Engineering (light current) neBTech in Electrical Engineering eyayithola eDurban University of Technology (DUT).
Ngesikhathi icijwa ikhono kulo mkhakha yathola ithuba lokuthi ibe iyofunda ngomsebenzi esikhungweni esinobuxhakaxhaka obubheka izinkanyezi, iHartebeesthoek Radio Astronomy Observatory (HartRAO) eseGauteng.
Ukusebenza kulo mkhakha, uNksz Moso, uthi yikho okumenze waba nothando lokusebenza ngezinkanyezi wase eqedela iziqu zakhe zeBachelor of Science, iHonours Degree iPhysics e-UKZN, wase ebhalisela iMasters.
UNksz Moso usohlelweni iDST-Albertina Sisulu Fellowship.
“Engikuqaphelile ukuthi bekuyimina kuphela isitshudeni kubantu bakwaZulu-Natal obeqokelwe kulo mncintiswano. Abantu ebengingenele nabo bekungabantu asebemnkantshubomvu kulo mkhakha,” kusho uNksz Moso.